पेट्राेलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि - Rastrakokhabar
काठमाडौं, ३ जेठ । नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमका अनुसार आइतबार राति १२ बजेपछि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढाएको हो । आयल निगमले एलपी ग्यास र अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडानको इन्धनको मूल्य भने बढाएको छैन ।
निगमले पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २/२ रुपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि गरेको हो । जसअनुसार पेट्रोलको मूल्य १२३ र डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १०६ र आन्तरिक हवाइ इन्धनको आन्तरिक उडानाके मूल्य प्रतिलिटर ७८ कायम भएको छ ।
Previous Post	आजको राशिफल (वि. सं. २०७८ जेठ ३ गते, सोमबार)
Next Post	देशभरका ७४ जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू, तीन जिल्ला बाँकी